Ku Iibso Midabada Midabka leh ee RGB Sawiridda Lamp Stick Wand With Tripod - Shixnad Bilaash ah & Canshuur La'aan | WoopShop®
Midabka leh ee RGB Sawir qaadista Lamp Stick Stick Wand With Tripod
Gaadiidka: Shiinaha Shiinaha1 Shiinaha6 Shiinaha4 Shiinaha3 Shiinaha5 Shiinaha2
Shiinaha Shiinaha1 Shiinaha6 Shiinaha4 Shiinaha3 Shiinaha5 Shiinaha2
Midabka leh ee RGB Sawir qaadista Lamp Stick Stick Wand With Tripod - Shiinaha gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
RGB+Iftiin laba-midab leh: 2500K-8500K hagaajinta heerkulka midabka ballaaran; 1530 ° Midabyo buuxa ， waxay taageeraan RGB iyo HSI qaababka midabka midabka, dhalaalka, buuxinta la hagaajin karo.
Tayo Sare: iftiinkani waa mid xooggan, raagaya, oo jilicsan; Markaa waxaad gacanta ku hayn kartaa si aad u toogato ama ugu adeegsato aaladaha kale sida tripod oo ah daloolka 1/4.
Hawlgal fudud: Muujinta Oled, waxaad ku beddeli kartaa qaabka oo aad hagaajin kartaa mid kasta Halbeegga si cad oo fudud.
Batariga awoodda badan leh: Looma baahna inaad iibsato baytariyo dheeraad ah
Si Weyn Loo Adeegsaday: Iyada oo leh waxqabadka midabka weyn, batteriga awoodda leh, iyo hawlgalka fudud ee OLED, waxaa si ballaaran loogu adeegsan karaa xaalado badan sida toogashada shayga, rinjiyeynta iftiinka, sawirka, masraxa, xafladda, Gurmadka, Casho, iwm. Adigaa go'aaminaya adeegsiga!
Riix dheer muddo 3 ilbidhiqsi si aad u ogaato shaqada bedelka.
"M" waa badhanka qaabka, gudaha waxaa ku jira 5 qaab.
Habka 1: M1 wuxuu leeyahay 7 qaab, riix "+/-" si aad u doorato
Riix "S" oo riix "+/-" si aad u hagaajiso iftiinka iftiinka.
Habka 2: RGB 7-midab-roon, riix "+/-" si aad u hagaajiso xawaaraha isbeddelka,
Qaabka 3: Casaan, cagaar, iyo buluug saddex midab,
Riix "+/-" si aad u hagaajiso iftiinka iftiinka.
Habka 4: riix "+/-" wuxuu leeyahay 5 saamayn iftiin, (hooska, daruuraha, iftiinka qorraxda, fluorescent, guluubka)
Habka 5: riix "+/-" wuxuu hagaajin karaa heerkulka midabka (3000K ilaa 6500K)
3. Badeecaddan waxaa si toos ah loogu dallaci karaa DC5V, habka lacag -bixinta waxaa loo isticmaali karaa si caadi ah
Iftiimintu waxay ku habboon tahay in lagu toogto meel mugdi ah iyada oo aan la shidin moodallo ma guurto ah, waxa kaliya ee aan u baahanahay. Habab badan, oo ay ku jiraan "Xisbi", laakiin marka laga reebo RGB -ga caadiga ah, uma baahnid wax. Kiis aad u jilicsan. Waxaa jira daboollo lagu qaado, fiican. Waxaan ka qaataa 20 Watt qiyaastii saacad, saddex saacadood ayaa gubanaya. Iftiin weyn lacag.
Lo únicoico es que cuando cambias los grados Kelvin de frío a cálido no se nota farto laife
Aad u fiican, si fiican buu u shaqeeyaa! Waxay la timid fog, fiilo iyo boorso safar oo fiican. Ka taxaddar, dhoofintu xoogaa way dheer tahay laakiin waa u qalantaa.
Kaamil ah! Waxay ku timid 1 maalin Spain!